गरीब हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनुपर्दैन, अपनाउनुहोस् यी उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
गरीब हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता लिनुपर्दैन, अपनाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौं । धेरै पैसा कमाएर धनी बन्ने रहर अधिकांशलाई हुन्छ । तर, चाहदा चाहदै पनि अधिकांशको त्यो रहर पुरा हुन सकेको हुदैन । धनी बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाइंसँग बचत गर्ने चाहाना हुनुपर्छ । हुनत पैसा जोगाउने र बचत गर्ने चाहना अधिकांशमा हुन्छ । तर, चाहँदा चाहँदै पनि सबैले पैसा जोगाउन सकिरहेका हुदैनन् । साँच्चै पैसा बचत गरी सही ठाउँमा उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यी उपायहरु पयोगी हुन सक्छन ।
याे पनि पढ्नुस ज्योतिषशास्त्रअनुसार धन आर्जन गर्ने ५ उपाय
श्रीमान–श्रीमती र साना छोराछोरीसँगै किनमेल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने बिचार पुर्‍याउनु होस् । तपाईंका छोराछोरीले बजारमा देखिने आकर्षक सबै वस्तु किन्न जिद्धी गर्न सक्छन् । उनीहरूको माग अनुसार किनमेल गर्दा धेरै खर्च हुन सक्छ । तपाईका बाल–बच्चा र श्रीमान–श्रीमतीको बढी ढिपी गर्ने बानी छ ? हो भने, किनमेलमा जाँदा उनीहरूलाईसँगै नलैजानुहोस ।
उनीहरुका लागि पनि आवश्यकता अनुसार आफैले सामान खरिद गर्नुहोस । नियमित रुपमा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा खाना खाने बानी छ ? अव त्यसलाई कम गर्नुहोस । तपाईंले घरमै पनि राम्रा परिकार बनाएर खान सक्नुहुन्छ ।
घर बाहिर खानाका लागि जति खर्च लाग्छ । त्यसले तपाईको सम्पूर्ण परिवारलाई खान खुवाउन पुगेर पनि बचत हुन सक्छ । बाहिरको खानाको तुलनामा घरमै पकाएर खाँदा तपार्इंको स्वास्थ्य बिग्रने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यसले स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि कम हुन्छ ।
पैसा बचत गर्नका लागि तपार्इंले जहाँपायो त्यही किनमेल गर्न छोड्नु होस् । एकै ठाउँमा किनमेल गर्दा विक्रेतासँग राम्रो सम्बन्ध बन्ने भएकाले केही सस्तोमा सामान पाइन सक्छ ।
किनमेल गर्न जाँदा धेरै मोलतोल (बार्गेनिङ) गर्नुहोस् । वस्तुको परिमाण भन्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिनुहोस । आज तपाईले किनेको गुणस्तरीय वस्तुले लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता टर्न सक्छ । यसो गर्दा तुरुन्तै उक्त वस्तु खरिद गर्ने आवश्कता हुदैन । परिणाम बचत वृद्धि हुन्छ ।
लामो समयसम्म फेला नपरेको/डुबेको तपाईको पैसा उठ्ती भएको छ ? चिट्ठा, उपहार मार्फत ठूलो रकम हात परेको छ । यदि हो भने, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस ।
त्यत्तिकै आएको त हो भनेर अनावश्यक खर्च नगर्नु होस् । तपाईले कसैलाई ऋण दिनु भएको छ भने समयमै उठाउनुहोस् । लामो समय भएपछि ऋण उठाउन अप्ठ्यारो पर्नसक्छ ।
नियमित बचत गर्ने बानी आजैदेखि शुरू गर्नुहोस । आजको सानो बचतले पूँजी निर्माणमा ठूलो सहयोग हुन्छ । आज खर्च गर्दा भोलीको बारेमा पनि सोच्नुहोस । भोलीका लागि केही बचत गर्नुहोस ।
बचत बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थामा गर्नुहोस् । त्यसो गर्दा बचत सुरक्षित हुनुका साथै ब्याज पनि पाइन्छ । यसरी संकलन भएको बचतबाटै बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने भएकाले त्यसले आर्थिक गतिविधिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।
अरुको देखासिखी गर्ने बानी धेरैमा हुन्छ । सबै अवस्थामा त्यस्तो बानी राम्रो हुदैन । अरुको देखासीखी गरी अनावश्यक/अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्नूहोस ।
आफ्नो क्षमता र आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्नुहोस । ‘अरु घोडा चढे भन्दैमा आफु धुरी चढ्ने’ गल्ति नगर्नुहोस । यही बानीले पनि धेरै रकम बचत गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, पैसा जोगाउन सजिलो छ । त्यसकालागि तपाईंको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रत्येक पटक खर्च गर्नु अघि एक पटक सोच्नुहोस ।
तपाई कहाँ र किन खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसको उपयोगीता के र कति छ ? यत्ति कुरामा मात्र ध्यान दिन सक्नुभयो भने छिट्टै तपाईंले सोचेको भन्दा बढी बचत गर्न सफल हुनुहुनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट
ट्याग्स: money, Rich Man